Imizekelo yokubala - Shenzhen HONGSBELT
Umhambisi othe tye
Kwifektri yokumisa inyama, ubushushu be-ambient bulawulwa kwi-21 ° C, kwaye yamkelwe i-HS-100 yomgca wokumisa inyama. Ubunzima obuqhelekileyo benyama yi-60kg/M2. Ububanzi bebhanti yi-600mm, kwaye ubude obupheleleyo bomthumeli ngu-30M kwi-design ethe tye. Isantya sokusebenza sebhanti lokuhambisa yi-18M/min kwindawo yokufuma nokubanda. Umhambisi uqala ekothuleni kwaye akukho mqathango wandayo. Yamkela i-sprockets enamazinyo ayi-8 kwi-192mm ububanzi, kunye ne-38mm x 38mm ye-stainless steel drive shaft. Ifomula yokubala efanelekileyo yile ilandelayo.
Ukubalwa koxinzelelo lwethiyori yeyunithi - TB
TB =〔 ( 60 + ( 2 × 8.6 ) × 0.12 〕× 30 = 278 (kg / M)
Ngenxa yokuba ayilulo ukuhanjiswa kwemfumba, iWf inokungahoywa.
Ukubalwa kweyunithi yoxinzelelo lulonke - TW
Ukubalwa kweyunithi yoxinzelelo oluvumelekileyo - TA
IFOMU : TA = BS × FS × FT
Ngenxa yexabiso le-TA likhulu kune-TW, Ngoko ke, ukwamkela nge-HS-100 kukhetho olufanelekileyo.
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket se-HS-100 kwiSahluko se-Drive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga ne-140mm kolu yilo. Zombini i-drive/Idler end of conveyor kufuneka ibekwe nge-3 sprockets.
I-Deflection ratio ye-drive shaft - i-DS
IFOMU : SL = ( TW + SW ) × BW
Xa kuthelekiswa ne-Maximum Torque Factor kwiyunithi ye-Shaft Selection, siyazi ukuba ukusetyenziswa kwe-38mm × 38mm square shaft kukhuselekile kwaye kukhethwe ngokufanelekileyo.
IFOMU : DS = 5 × 10-4 × ( SL x SB3 / E x I )
DS = 5 × 10-4 × [ (173.7 × 7003 ) / ( 19700 × 174817 )] = 0.0086
Ukuba isiphumo sobalo sincinci kunexabiso elisemgangathweni elidweliswe kwiTheyibhile yokuPhambuka; ukwamkela iibheringi ezimbini zebhola kwanele kwinkqubo.
Ukubalwa kwe-shaft torque - TS
Xa kuthelekiswa ne-Maximum Torque Factor kwiyunithi yokuKhethwa kweShaft, siyazi ukuba ukusetyenziswa kwe-50mm × 50mm square shaft kukhuselekile kwaye kukhethwe ngokufanelekileyo.
Ukubalwa kwamandla eHashe - HP
I-HP = 2.2 × 10-4 × [ ( 10675 × 10 ) / 66.5] = 0.32 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini wokuhambisa umbane angaphulukana ne-11% ngexesha lokusebenza.
Ukwamkela i-1/2HP drive motor lukhetho olufanelekileyo.
Sidwelisa imizekelo esebenzayo kwesi sahluko kwireferensi yakho, kwaye sikukhokele ukuba ubalele uvavanyo kunye nokuqinisekisa iziphumo zokubala.
Umhambisi oqhutywa kwiziko
I-conveyor eqokelelweyo ihlala isetyenziswa kwishishini lesiselo. Uyilo lokuhambisa luyi-2M ububanzi kunye ne-6M ubude besakhelo esipheleleyo. Isantya sokusebenza somthumeli sikwi-20M/min; iqala kwimeko yeemveliso eziqokelelana kwibhanti kwaye isebenze kwindawo eyomileyo eyi-30℃. Ukulayishwa kwebhanti yi-80Kg / m2 kunye neemveliso zokuthutha iikhenki ze-aluminium kunye nesiselo ngaphakathi. I-wearstrips yenziwe ngezinto ze-UHMW, kwaye yamkelwe i-Series 100BIP, i-sprocket yensimbi engenasici enamazinyo angama-10, kunye ne-stainless steel drive / i-idler shaft kwi-50mm x 50mm ubukhulu. Iifomula zokubala ezifanelekileyo zezi zilandelayo.
Ukunyuka kokuhanjiswa - Wf
Ukubalwa kweyunithi yoxinzelelo lulonke- TW
I-TWS yayo ingundoqo wokuqhuba
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket se-HS-100 kwiSahluko se-Drive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga ne-120mm kolu yilo.
DS = 5 × 10-4 [ ( SL × SB3 ) / ( E × I )]
DS = 5 × 10-4 × [ ( 1791 × 21003 ) / ( 19700 × 1352750 )] = 0.3 mm
TS = 884 × 2 × 97 = 171496 ( kg - mm)
I-HP = 2.2 × 10-4 [ ( TS × V ) / R ]
HP =2.2 × 10-4 × [ ( 171496 × 4 ) / 82] = 1.84 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini wokujika anokuphulukana ne-25% ngexesha lokusebenza.
MHP = [ 1.84 / ( 100 - 25 )] × 100 = 2.45 ( HP )
Ukwamkela i-3HP drive motor lukhetho olufanelekileyo.
I-incline conveyor system ibonisa kulo mfanekiso ungasentla yenzelwe ukuhlamba imifuno. Ubude bayo obuthe nkqo yi-4M, ubude obupheleleyo bomthumeli yi-10M, kunye nobubanzi bebhanti yi-900mm. Isebenza kwindawo yomswakama kunye nesantya se-20M / min ukuthutha ii-peas kwi-60Kg / M2. I-wearstrips yenziwe ngezinto ze-UHMW, kwaye ibhanti lokuhambisa yi-HS-200B kunye ne-50mm (H) iindiza kunye ne-60mm (H) yabalindi becala. Inkqubo iqala kwimeko ngaphandle kokuthwala iimveliso, kwaye igcina ukusebenza ubuncinane kwiiyure ze-7.5. Ikwamkele kunye ne-sprockets enamazinyo ali-12 kunye nentsimbi engatyiwa 38mm x 38mm drive/idler shaft. Iifomula zokubala ezifanelekileyo zezi zilandelayo.
Ngenxa yoko ayikokuqokelelwa kokuhanjiswa, Wf inokungahoywa.
Ngenxa yexabiso i-TA inkulu kune-TW; ngoko ke, ukwamkela ibhanti lokuhambisa iHS-200BFP lukhetho olukhuselekileyo nolufanelekileyo.
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket se-HS-200 kwiSahluko se-Drive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga nama-85mm kolu yilo.
DS = 5 × 10-4 × [ ( SL x SB3 ) / ( E x I )]
DS = 5 × 10-4 × [ ( 475 × 10003 ) / ( 19700 × 174817 )] = 0.069 mm
TS = 322.6 × 0.9 × 49 = 14227 ( kg - mm)
I-HP = 2.2 × 10-4 × [ ( 14227 × 20 ) / 49] = 1.28 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini wokujika anokuphulukana ne-20% ngexesha lokusebenza.
MHP = [ 1.28 / ( 100 - 20 )] × 100 = 1.6 ( HP )
Ukwamkela i-2HP drive motor lukhetho olufanelekileyo.
Inkqubo yokuhambisa i-conveyor kumfanekiso ongentla yi-90 degree converting conveyor. I-wearstrips kwindlela yokubuyisela kunye nendlela yokuthwala zombini zenziwe ngezinto ze-HDPE. Ububanzi bebhanti yokuhambisa yi-500mm; ithatha ibhanti le-HS-500B kunye ne-sprockets enamazinyo angama-24. Ubude becandelo elisebenzayo elichanekileyo yi-2M ekupheleni kwe-idler kunye ne-2M ekupheleni kwe-drive. Iradiyasi yayo yangaphakathi yi-1200mm. I-friction factor ye-wearstrips kunye nebhanti yi-0.15. Izinto zokuthutha ziibhokisi zeebhokisi ezikwi-60Kg/M2. Isantya sokusebenza komthumeli ngu-4M/min, kwaye sisebenza kwindawo eyomileyo. Ubalo olunxulumeneyo lulandelayo.
Ukubalwa kweyunithi yoxinzelelo lulonke - TWS
Uxinzelelo olupheleleyo lwecandelo lokuqhuba kwindlela yokuthwala.
T1 = 5.9 + 0.35 × 2 × ( 5.9) = 10.1
IFOMU : TN = ( Ca × TN-1 ) + ( Cb × FBW × RO ) × WB
Uxinzelelo lwecandelo lokujika kwindlela yokubuya. Ngexabiso le-Ca kunye ne-Cb, nceda ubhekisele kwiTheyibhile Fc.
IFOMU : TN = TN-1 + FBW × LR × WB
Uxinzelelo lwecandelo elithe tye kwindlela yokubuya.
IFOMU : TN = TN-1 + FBW × LP × ( WB + WP )
Uxinzelelo lwecandelo elithe tye kwindlela yokuthwala.
IFOMU : TN = ( Ca × TN-1 ) + ( Cb × FBW × RO ) × ( WB + WP )
Iyonke ingcinezelo yebhanti TWS (T6)
Uxinzelelo olupheleleyo lwecandelo elithe tye kwindlela yokuthwala.
Ngenxa yexabiso i-TA inkulu kune-TW; ngoko ke, ukwamkela Series 500B ibhanti lokuhambisa kukhetho olukhuselekileyo nolufanelekileyo.
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket se-HS-500 kwiSahluko se-Drive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga ne-145mm.
DS = 5 × 10-4 × [ ( SL × SB3 ) / ( E × I )]
DS = 5 × 10-4 × [ ( 72.14 × 6003 ) / ( 19700 × 174817 )] = 0.002 ( mm)
HP = 2.2 × 10-4 × [ ( TS × V / R )]
I-HP = 2.2 × 10-4 × [ ( 6142 × 4 ) / 95] = 0.057 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini wokujika anokuphulukana ne-30% ngexesha lokusebenza.
MHP = [ 0.057 / ( 100 - 30 )] × 100 = 0.08 ( HP )
Ukwamkela i-1/4HP drive motor lukhetho olufanelekileyo.
Uthotho Turning Conveyor
Isixokelelwano sokuhambisa esijikelezayo sakhiwe ngabahambisi ababini be-90 degree kunye necala elichaseneyo. I-wearstrips ngendlela yokubuyisela kunye nendlela yokuthwala zombini zenziwe ngezinto ze-HDPE. Ububanzi bebhanti yokuhambisa yi-300mm; ithatha ibhanti le-HS-300B kunye ne-sprockets enamazinyo ayi-12. Ubude becandelo elisebenzayo elichanekileyo li-2M ekupheleni kwe-idler, i-600mm kwindawo yokudibanisa, kunye ne-2M ekupheleni kwe-drive. I-radius yayo yangaphakathi yi-750mm. I-friction factor ye-wearstrips kunye nebhanti yi-0.15. Izinto zokuthutha ziibhokisi zeplastiki kwi-40Kg/M2. Isantya sokusebenza komthumeli si-5M/min, kwaye sisebenza kwindawo eyomileyo. Ubalo olunxulumeneyo lulandelayo.
T2 = ( 1.27 × 10.1) + ( 0.15 × 0.35 × 1.05 ) × 5.9 = 13.15
Uxinzelelo lwecandelo lokujika kwindlela yokuthwala. Ngexabiso le-Ca kunye ne-Cb, nceda ubhekisele kwiTheyibhile Fc
Ngenxa yexabiso i-TA inkulu kune-TW; ngoko ke, ukwamkela Series 300B ibhanti lokuhambisa kukhetho olukhuselekileyo nolufanelekileyo.
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket kwiSahluko seDrive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga ne-145mm.
DS = 5 × 10-4 × [ ( SL × SB3 ) / ( E x I )]
DS = 5 × 10-4 × [ ( 44.28 × 4003 ) / ( 19700 × 174817 ) = 0.000001 ( mm)
TS = 136.3 × 0.3 × 92.5 = 3782.3 ( kg - mm)
I-HP = 2.2 × 10-4 × [ ( 3782.3 × 5 ) / 92.5] = 0.045 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini we-center drive conveyor anokulahlekelwa malunga ne-30% ngexesha lokusebenza.
MHP = [ 0.045 / ( 100 - 30 )] × 100 = 0.06 ( HP )
Imifanekiso ebonisa apha ngasentla ngumzekelo wenkqubo yokuhambisa ejikelezayo enamaleko amathathu. Iingubo zendlela yokuthwala kunye nendlela yokubuya zenziwe ngezinto ze-HDPE. Ububanzi bebhanti bubonke yi-500mm kwaye yamkele i-HS-300B-HD kunye ne-sprockets enamazinyo ayi-8. Ubude becandelo elithwele ngokuthe tye kwi-drive kunye ne-idler end yi-1 mitha ngokulandelanayo. I-radius yayo yangaphakathi yokujika yi-1.5M, kwaye izinto zokuthutha ziibhokisi zeposi kwi-50Kg/M2. Isantya sokusebenza somthumeli si-25M / min, sithambekele ekuphakameni kwe-4M kwaye sisebenze kwindawo eyomileyo. Ubalo olunxulumeneyo lulandelayo.
I-TB = [ 2 × 3.1416 × 2 × 3 + ( 1 + 1 )] ( 50 + 2 × 5.9 ) × 0.35 + ( 50 × 2 )
I-TB = 958.7 ( Kg / M )
Ngenxa yexabiso i-TA inkulu kune-TW; ngoko ke, ukwamkela Series 300B-HD ibhanti lukhetho olukhuselekileyo nolufanelekileyo.
Nceda ubhekisele kwisithuba seSprocket se-HS-300 kwiSahluko se-Drive Sprockets; isithuba esikhulu se-sprocket simalunga ne-145mm.
DS = 5 × 10-4 × [ ( 772.7 × 6003 ) / ( 19700 × 174817 )] = 0.024 ( mm)
I-HP = 2.2 × 10-4 × [ ( 70942.8 × 4 ) / 60 = 1.04 ( HP )
Ngokubanzi, amandla omatshini we-center drive conveyor anokulahlekelwa malunga ne-40% ngexesha lokusebenza.
MHP = [ 1.04 / ( 100 - 40 )] × 100 = 1.73 ( HP )